PWHT Ọkpụkpọ Cable na-agbanwe agbanwe, eriri mkpuchi ncha, Igwe mgbakwasị ụkwụ na-ekpo ọkụ, Mwepụ nkwụnye ihe nkedo
Home / PWHT Machine / PWHT na-agbanwe eriri USB site na mmiri mma
Categories: Mkpụrụ Ejiri Ọkụ, PWHT Machine Tags: Ejiri USB eriri, ihe mkpuchi welding, Igwe PWHT, USB eriri USB, pilt coil, Ejiri mmiri mee ka mmiri dị mma, USB dị mfe, Ugboro ubochi na-acha uhie uhie
Onye na-emepụta PWHT Kaadị Cable / PWHT Pịmpụ Mkpụrụ / PWHT ụrọ ntinye ntinye maka PWHT na Ịkwado pipeline, wdg.
model Mmepụta Power Ọsọ ọsọ Ugbu a Arọ Ọsọ ọsọ voltaji Frequency
Ihe 380V 3,
(220V, 440V) Nhọrọ
Atingdị egwu Itinye n'ọkwa Heating
Heating Tamp iche 0ºC ~ 1100ºC
Speedgba ọkụ ọkụ 5ºC ~ 400ºC kwa nkeji
Typedị jụrụ Ikuku jụrụ oyi
Thermocouple K .dị
Okpomọkụ edekọ Onye na-edekọ dijitalụ na Channel 6
Ngwunye ikuku Mgbapu ntinye na nkedo nkedo
The akụkụ nhọrọ nke induction usoro oku
l Ike ike ikpo oku
l Ngwunye mkpuchi (Mkpịsị ntinye ntinye) ma ọ bụ (Soft induction coil)
l Njikọ USB maka adaba iji jikọọ eriri igwe na ike kpo oku
l Okpomoku njikwa
l PLC ihuenyo mmetụ
l Okpomọkụ edekọ na ngwa nbipute
l K ụdị thermonuclear & njikọ USB
l mkpuchi blanket
l Ma akụkụ ọzọ.
MYD usoro ntinye ọkụ iji tụnyere okpomọkụ ahụ na - adịghị ike:
l Otu edo
l Akwa Ọsọ
l Sachekwa Energy: 30-80%
l Ikuku ikuku: na-arụ ọrụ nke ọma na -10 ℃ -40 ℃
l Ngwunye ike ikpo ọkụ: Iji kpoo ọrụ ọrụ na mkpuchi mkpuchi ya gburugburu. Ọdịdị ọkụ dị elu na arụmọrụ kpo oku na obere ume furu efu.
l PLC emetụ ihuenyo: Intuitive ịhụ na mfe iji rụọ ọrụ.
l Ngwunye nkedo nkedo: Mfe ikuku na onodu ozo.
l Ihe mmeghe mmeghe na-ewepu: mfe iji rụọ ọrụ ma megharịa.
l Onye na-edekọ ihe ọkụ ọkụ: Dekọọ usoro ọkụ ọkụ niile ma bipụta ya n'otu ntabi anya.
l Onye na-ahụ maka okpomọkụ: Hegba ọkụ dị ka nkọwa ọkụ ọkụ chọrọ na nkwụsị ± 3 ℃.
Ngwa ha kachasị bụ ikpo ọkụ ọkụ, okpomọkụ na-ekpo ọkụ ọkụ, ọgwụgwọ okpomọkụ na-ekpuchi weld, enyemaka mgbakasị, nkedo na-ekpo ọkụ ọkụ, ihe mgbakwunye, wdg.
l Tupu ọkụ: maka mkpuchi, ikwe, dabara adaba & ekwesighi, ịgbado ọkụ na mgbakọ ọkụ.
l Ọgwụgwọ ọgwụgwọ post-weld: tank, mmiri ọkụ ma ọ bụ ọrụ ndị ọzọ
l Heating: ebu kpo oku, ụgbọ mmiri, zinc bat, nnukwu & oge ufodu metal akụkụ
l Igwe anwụrụ: mmanụ pipeline, gas pipeline, mmiri pipeline, petrochemical pipeline na ihe ndị ọzọ.
Ndị na-eji ihe ubi eme ihe bụ petrochemical, mmanụ na gas pipelines, ụgbọ mmiri, ụgbọ mmiri, ígwè, tankị, igwe mmiri, arịa, nrụgide ụgbọ mmiri, tankị, ngwugwu ígwè, ọkpụkpụ spatial, bridges ụgbọ okporo ígwè, mmiri eletrik, mwube, ntinye, nhazi plastik, usoro nchekwa nke ume, ebu, ihe ndi ozo di iche iche, wdg.